IRose Cottage ngakuMlambo - I-Airbnb
IRose Cottage ngakuMlambo
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguBrittany
Yiza undwendwele indlu yam encinci epinki ngasemlanjeni! Kufuphi neMbali yeStillwater kunye neAfton! I-Afton Alps Ski Resort ikwimizuzu esi-8 kude! Iitoni zokuthenga, izinto zakudala, iibhari ezincinci ezintle kunye neendawo zokutyela kunye nokuhamba ngeendlela ezininzi! I-cottage yam ifanelekile ngeempelaveki zamantombazana, i-bachelorette okanye ishawari ngeempelaveki, kunye nohambo lwe-ski! Ndiyathanda ukuphatha iindwendwe zam ngewayini, izibiliboco, kunye nezinto ezimnandi ze-spa ukuze ndizonwabele! Zive ukhululekile ukusebenzisa igumbi lam lobugcisa! Yenza into entle! Sayina incwadi yam yeendwendwe kwaye ube nexesha elimnandi!
I-Stillwater kunye ne-Afton inayo yonke into yeveki emnandi yokubona indawo! Zininzi iindawo zokutyela ezimangalisayo kunye nokuthenga!
Indawo encinci yendlu kufutshane nomlambo. Kuthe cwaka kakhulu kwaye abamelwane bayamangalisa! Kufuphi ne-ski resort kunye nolwandle!
Yonwabele indawo yam kwaye unditsalele umnxeba nanini na! Ndingakunceda ukucwangcisa imisebenzi yosuku abantu abadla ngokuyonwabela kule ndawo kwaye ndikukhomba kwicala elifanelekileyo lokutya okulungileyo kunye nemivalo! Ukuba kukho into oyifunayo, ndisendleleni!
Yonwabele indawo yam kwaye unditsalele umnxeba nanini na! Ndingakunceda ukucwangcisa imisebenzi yosuku abantu abadla ngokuyonwabela kule ndawo kwaye ndikukhomba kwicala elifaneleki…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lakeland